သက်တန့်ချို: တောင်ကြီးမြို့ ပတ္တမြားလှိုဏ်ဂူနှင့်ရွှေဘုန်းပွင့်ဘုရားသို့အလည်တစ်ခေါက်
Posted by သက်တန့်ချို at 10:22 AM
cherry November 25, 2011 at 5:06 PM
jasmine(တောင်ကြီး) November 25, 2011 at 6:08 PM
မှာပါ..မြစိမ်းတောင်ကို အိမ်ရှေ့ လမ်းမကြီးကနေတက်ရပါတယ်
နေလင်း November 25, 2011 at 11:40 PM
ဂူအ ၀င်က ဆင်းတုတော် သေးသေး လေး တွေ က အရင် နှစ် ကမှ တည်ထားတာပါ။ အောက် ကဆင်းတုတော် ကြီး တွေက တော့ ကြာပါ ပြီ. အား ပေး လျှက်ပါ။
blackroze November 25, 2011 at 11:55 PM
7pm November 26, 2011 at 9:07 AM
နန်းသက် November 28, 2011 at 12:02 AM
မြန်မာပြည်ပြန်လာလည်ရင် အဲဒီလှတဲ့နေရာလေးတွေကို မောင်နဲ့ တူတူသွားလည်မယ်.
Aung Ko December 15, 2011 at 2:15 AM
အင့်....၂၀၀၄ ကနေ စပြီးမေ၇ာက်ဖြစ်တော့တာပါ..။အ၇မ်းလွမ်းတယ် ..။မွေး၇ပ်မြေ...
နိုင်းနိုင်းစနေ December 17, 2011 at 3:37 AM
တောင်ကြီး ချစ်စရာကောင်းတယ် လှတယ်လို့..
တောင်ကြီးသူတွေ ပိုတောင်ချစ်စရာကောင်းတယ် မဟုတ်လား.. ဟား..ဟား
lonelyplanet February 11, 2012 at 11:49 AM
မေလေး March 19, 2012 at 8:52 PM